Reolink C2 Pro, indlela ekrelekrele yokujonga ikhaya lakho [Uhlalutyo] | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Ikhaya, Reviews, Ikhamera
Sihlala sigxile kuhlalutyo lweemveliso ze-IoT Okanye umiselwe ukwenza ubomi bakho bube lula ekhaya, iidemokhrasi, ukubekwa kweliso kunye nokukhuseleka ngamacandelo anomdla kakhulu aqhuma kakhulu kunanini na ngaphambili ngenxa yokukhula kwabancedisi ababonakalayo kumaxabiso enkqonkqozo afana neAmazon neGoogle.
Ngeli xesha siza kuhlalutya imveliso evela kwifemu ebesikade sinayo ngaphambili, sithetha ngeReolink C2 Pro, ikhamera yokugada ebiza kakhulu kwaye engabizi kakhulu. Ke ngoko, siyakumema ukuba uhlale nathi kuba siza kukubonisa ngokweenkcukacha zekhamera entsha yeReolink.
Njengakwizihlandlo ezidlulileyo, siza kufumana ezona nkcukacha ziphambili zale mveliso, siqale ngezixhobo kunye noyilo, ukuze kamva sazi ubuchwephesha bayo kwaye kunjalo, sikuxelele ukuba kwenzeke ntoni emva kokusebenzisa le khamera Reolink C2 Pro. Nangona kunjalo, ukuba ucwangcisa ukuya ngqo ekusebenzeni, ungayithenga ngqo ngexabiso elifanelekileyo kwi LONTO isuka kwiAmazon. Ngaphandle kokuqhubela phambili siyakumema ukuba uhlale phantsi, siqala ngohlalutyo lwale khamera yokucacisa icace gca kwaye ichanekile.
1 Izixhobo kunye noyilo: Ubuncinci kunye nokusebenza ngokuchaseneyo
2 Unboxing kunye nomxholo wephakheji
4 Uqwalaselo kunye namava omsebenzisi
Izixhobo kunye noyilo: Ubuncinci kunye nokusebenza ngokuchaseneyo
Ngesi sihlandlo, uRolink kwakhona ukhetha ukunxiba ikhamera yakhe kwiplastikhi emhlophe ethi izame ukungabonwa phantse kuyo nayiphi na imeko. Sinesiseko esisezantsi esingqukuva apho sinophawu lokutyikitya ngaphambili, ngelixa kwelinye icala sifumana umngxuma "wokusetha kwakhona" ikhamera xa sinokufumana nakuphi na ukungasebenzi kakuhle. Ngasemva sinezongezo, a Igalelo le-Ethernet, izibuko le-microUSB lokutshaja kunye nekhadi le-microSD slot Oko kuyasivumela ukuba sigcine urekhodo ngokusekwe koko sikubela kwisicelo.
Ubungakanani: X x 10,3 9,5 11,7 cm
Ubunzima: I-299 gram
Sinale ngingqi ingemva Ii-eriyali ezimbini zonxibelelwano ze-WiFi isithsaba isixhobo ngendlela eqhelekileyo. Okokugqibela sinekhamera ephezulu, endaweni yoko inzwa, icwangciswe kwi-arc eya kuvumela ikhamera ukuba ijongiswe ukusuka ezantsi phezulu kwaye ke oko kusenze sikwazi ukulawula i-angle ethe nkqo. Ngendlela efanayo, isiseko sineringi yesilivere esinyithi eyahlulahlula indawo eshukumayo kwinto esisigxina, kuba siya kuyikhumbula loo nto Le khamera inamathuba okujikeleza ngokuthe tyaba ukubonelela ngokubonakalayo.
Unboxing kunye nomxholo wephakheji
Njengamaxesha onke Phinda uqalise Bahlala besinika iimveliso zabo kwiphakheji efanelekileyo edibanisa izinto eziyimfuneko. Sinebhokisi emnyama engxande ethi nje ukuba siyivule, iya kusinika ukufikelela kwimvulophu encinci equlathe imiyalelo kunye isincamathelisi esiya kusivumela ukuba sazise ukuba siyarekhoda. Into elandelayo esinayo yibhokisi apho sifumana iplagi eneadaptha zamanye amazwe, kunye nentambo emalunga ne-1,8 yeemitha ubude.
Ikhamera sikhuseleke ngokuchanekileyo emazantsi kunye nesikhuseli esincinci seplastikhi kwindawo yesenzwa ukugcina ukuthembeka. Asinanto ingakumbi yokuqaqambisa, ukupakisha okuchanekileyo nalapho sifumana kuyo yonke into esiyifunayo ukuze sisebenze. Kubalulekile ukukhankanya iinkcukacha ezifakiwe inkxaso eya kusivumela ukuba sibeke ikhamera eludongeni ngendlela ezinzileyo enkosi kwizikhonkwane ezibini ezibandakanya oko kwaye kubonakala kum kuyinto emiselweyo xa uyibeka, nangona kunjalo, i-wiring yeyona nto iya kusikhawulela.
Icandelo lobuchwephesha lifanelekileyo kwaye siyayazi eyona nto unomdla wokwazi ngayo. Sinombono ebusuku ebusuku 5 MP ekwaziyo ukurekhoda kwisisombululo se-2560 x 1920 esinokuthi siyiguqule. Ukuphucula ukurekhoda kuye Ii-LED ze-infrared eziyi-8 ukuphucula ukusebenza kwe umbono ebusuku. Ngayo yonke le nto sinayo de 355º umbono othe tyaba kunye ne-105º umbono othe nkqo kunye ne 3x ukusondeza okubonakalayo. Ukuqhagamshela sinethuba lokusebenzisa i Ibhendi yeWifiOko kukuthi, idibanisa zombini kwinethiwekhi ye-2,4 GHz nakwiinethiwekhi ezithandwayo ezi-5 GHz enkosi kwi-eriyali zayo ezinonxibelelwano lwe-MIMO 2T2R. Okokugqibela, khankanya ukubanakho kokusebenzisa izithethi ezibini ezibekwe emacaleni, eziza kubonelela ngosasazo iindlela ezimbini zokumamela.
Malunga nokurekhoda nokudlala kwakhona, Zonke izinto ezirekhodiweyo zevidiyo ezibangelwa yinkqubo yokuchonga intshukumo zigcinwa kwikhadi le-MicroSD (ukuya kuthi ga kwi-64 GB) kwaye izilumkiso ezikhutshwe yikhamera zinokudlalwa ngalo naliphi na ixesha naphina, okoko nje ikhamera ixhunyiwe yiWiFi. Khumbula ukuba sinokubakho qwalasela nayiphi na i-NAS okanye umncedisi wokuba ezi rekhodi zigcinwe.
Uqwalaselo kunye namava omsebenzisi
Njengesiqhelo, ukuseta ikhamera kuyakhawuleza kwaye akukho zintlungu, kufuneka sikhuphele usetyenziso lweReolink (iOS)(Android), Cofa kwi «+» iqhosha kwaye ukhethe iReolink C2 Pro camera xa ivela kwiscreen, kodwa kufanelekile ukuba uqaphele ukuba okokuqala kufuneka sidibanise ikhamera ngentambo ye-Ethernet, ukuze inkqubo izenzekele. Emva koko sigxila kwikhowudi ye-QR yesicelo phambi kwekhamera kwaye iya kuqala ukusebenza.
Nje ukuba uqhagamshele kulawulo olusisiseko, Singasebenzisa i-joystick yokuhambisa ikhamera kwintando, kunye nokulawula izilumkiso, gcina iividiyo ezigcinwe kwikhamera kunye nokusondeza kwaye ukhethe imimandla ethile yekhamera. Njengakwezinye iimveliso zeReolink, ukulawulwa kwesicelo kulula kwaye kwangaxeshanye kusivumela ukuba sisebenzise ikhamera ukuba isebenze ngamaxesha athile osuku ngalunye.
Amathuba esicelo kunye nokusetyenziswa kwayo ngokulula
Iimpawu ezibonelela ngexabiso elifanelekileyo
Ngaba inokubumbana ngakumbi
Sihlangabezene nokusilela ekuphatheni
Eyona nto ndiyithandayo yale khamera ngokuchanekileyo kunokwenzeka ukuba uyihambise kunye nomgangatho olungileyo womfanekiso obonelelwa yisenzi senzwa. Nangona kunjalo, inelinye inqaku elingalungangaUmzekelo, kukuba kuthathelwa ingqalelo ukubanakho ukuhamba ngokuthe nkqo nangokuthe nkqo, kukhulu kakhulu. Ikhamera ixabisa i-euro ezingama-113,99 eAmazon, Kodwa ukuba uyithenga ngqo kwiwebhusayithi yeReolink (unxibelelwanoUya kufumana isaphulelo se-10% usebenzisa ikhowudi «nguyennguyen » ilungiselelwe kuphela abafundi beGajethi yeActualidad.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reolink C2 Pro, indlela ekrelekrele yokujonga ikhaya lakho [Uhlalutyo]
Okokuqala yayiyi-Alexa, kwaye ngoku uSonos udibanisa noMncedisi kaGoogle